အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ဆရာများက စာသင်ကျောင်းတွင် နှာခေါင်းစည်း မတပ်မနေရ အမိန့်ထုတ်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဒဲလပ်စ်မြို့ F.P. Caillet မူလတန်းကျောင်းရှိ ကစားသူမရှိသည့် ကစားကွင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟို့စ်တန်၊ ဇူလိုင် ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဆရာများအသင်း (TSTA) က ယခုနှစ်ဆောင်းဦးရာသီတွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းပြန်တက်ချိန်တွင် နှာခေါင်းစည်း လိုအပ်ချက်ကို အမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးရန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Greg Abbott က ဇူလိုင် ၂၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေ တစ်ဖန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူ လူပေါင်းများစွာကလည်း ကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံရသေးဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ အမေရိကန် ကလေးအထူးကု အကယ်ဒမီက အသက် ၂ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူတိုင်း စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ဖို့ အကြံပြုချက်ပေးထားပါတယ်” ဟု TSTA ဥက္ကဋ္ဌ Ovidia Molina ၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ KHOU 11 ရုပ်မြင်သံကြားက ဖော်ပြထားသည်။
“အကယ်၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Abbott က တက္ကဆက် ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာတွေနဲ့ သူတို့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘေးကင်းရေးကို အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဒေသခံ စာသင်ကျောင်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကို သူတို့ရဲ့ ကျောင်းတွေမှာ နှာခေါင်းစည်း လိုအပ်ချက် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးရမှာပေါ့” ဟု Molina က ပြောခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်၏ ကူးစက်မြန် ဒယ်လ်တာ (Delta) ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ဆေးရုံတက်ရောက်မှု အရေအတွက်မှာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စတုတ္ထအကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်သော ဟို့စတန် တည်ရှိရာ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဟာရစ်ကောင်တီတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် COVID-19 အန္တရာယ်အဆင့်ကို အဝါရောင်အဆင့်မှ လိမ္မော်ရောင်အဆင့်သို့ မြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟာရစ်ကောင်တီသည် မကြာသေးမီ သီတင်းပတ်များအတွင်း ယင်းပြည်နယ်ရှိ အခြားသောနေရာများအကြား COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် Abbott က COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု နှင့် ဆေးရုံတက်ရောက်မှုများ ဆက်လက်မြင့်တက်လာသည့်တိုင် နောက်ထပ် နှာခေါင်းစည်း မတပ်မနေရအမိန့် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်း Abbott က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
HOUSTON, July 27 (Xinhua) — The U.S. Texas State Teachers Association (TSTA) on Tuesday asked Governor Greg Abbott to allow for mask requirements when students go back to school this fall.
“With COVID-19 cases increasing again and many people still unvaccinated, the American Academy of Pediatrics has recommended that everyone older than2wearamask when they go back to school,” local TV media KHOU 11 quoted TSTA President Ovidia Molina as saying.
“If Gov. Abbott really cares about the health and safety of Texas students, educators and their communities, he will give local school officials and health experts the option of requiring masks in their schools,” Molina said.
The numbers of COVID-19 cases and hospitalizations continue to rise across the country partly due to the fast-spreading Delta variant of the coronavirus.
In Harris County of Texas, where the country’s fourth largest city of Houston is located, COVID-19 threat level was upgraded from yellow to orange, due toarise in COVID-19 cases.
Harris County is among other places in the state that sawaspike of COVID-19 cases in recent weeks. However, Abbott reiterated that there will not be another mask mandate even as COVID-19 cases and hospitalizations continue to climb. ■
Photo taken on Nov. 13, 2020 shows the empty playground of F.P. Caillet Elementary school in Dallas, Texas, the United States. (Photo by Dan Tian/Xinhua)